အတိတ်ကာလရဲ့ ပုံရိပ်များကို ရှာဖွေခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » အတိတ်ကာလရဲ့ ပုံရိပ်များကို ရှာဖွေခြင်း
အတိတ်ကာလရဲ့ ပုံရိပ်များကို ရှာဖွေခြင်း
Posted by နွယ်ပင် on Jun 7, 2011 in Entertainment, Myanma News, News, Photography |6comments
နှစ် ၊လ ၊ ရက် ၊ နာရီ တို တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလဲနေသလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တို့ကလည်း ပြောင်းလဲလျှက်ရှိနေပါတယ် ။ အနာဂတ်ကာလကို ဦးတည်ပြောင်းလဲနေချိန်မှာ အရင်အတိတ်ကာလက ကျန်ရစ်ခဲ့သော ပုံရိပ်များ ပျောက်ကွယ်သွားသောပုံရိပ်များကို မမြင်မတွေ့ဘူးတဲ့ သူများအတွက်အတိတ်မှ ပုံရိပ်များ (လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း 100 0န်းကျင်)က့ုံရိပ်များကို ၇ှာဖွေတင်ပြထားပါတယ် ….
(1880) ပြည့်နှစ်က ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် မီးသဘောင်္နှင့် ရွက်သဘောင်္ကြီးများ ကျောက်ချထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
ဗြိတိသျှကိုလိုနှီလက်ထက် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရွက်လွှင့်သဘောင်္ကြီးများ ဆိပ်ကပ်ခဲ့ပုံ ၊ မြန့်မာရိုးရာ ရွက်လွှင့်သဘောင်္ကြီးများသည် ဆန်စပါး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အဓိက ပါ0င်ခဲ့သည် …
တကယ့်ကို မြင်ရခဲတဲ့ ပုံတွေပဲနော်… ။
အဲ့ဒီခေတ်က ကင်မရာ ပေါ်ပြီလားဟင် …ဒါမှမဟုတ် တိုင်းတပါးသားက ရိုက်ပြီးမှ စုဆောင်းထားတဲ့ ပုံတွေလား … ။
etone ရေ …ဒီဓာတ်ပုံတွေက (1880) ခုနှစ်ကဆိုတော့ အဲ့အချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဗြိတိသျှ လူမျိုးတွေပိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ် . ဒီဓာတ်ပုံတွေကလည်း ဗြိတိသျှ လူမျိုးဖြစ်တဲ့ နိုဝယ်ဆင်းဂါး စုဆောင်းထားတဲ့ ပုံတွေပါ0င်တဲ့ စာအုပ်ကိုမှီငြမ်းပြီး “သမိုင်း0င်ပုံရိပ်များ” ဆိုပြီး ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကပုံတွေကို ဖော်ပြထားတာပါ ….
source က ဘယ်ကရလဲဟင်။ နောက်လည်းဆက်တင်ပေးသွားပါ။
သမိုင်းဝင်ပါ နွယ်ပင်လေးရေ သမိုင်း0င်မလုပ်ပါနဲ့နော်။ နောက်ပြီး ကိုလိုနီပါ။ ရန်ကုန်လို့ ပြင်လိုက်ဦးနော် အရင်ခေတ်တုန်းက ရန်ကုတ်ဖြစ်နေဦးမယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ ပုံတွေကို ကိုယ်မရှိသေးတဲ့ခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ ခံစားရတယ်။
စစ်သည်တော်စာပေက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။သမိုင်းဝင်ပုံရိပ်များတဲ့။ရှာကြည့်ပေါ့။
အမ အ၇မ်းအ၇ှာတော်တယ် ကျွန်တော်လာသွားတယ်